'म प्यानल बनाउँदिन'
Friday, 13 August 2010 09:50	नागरिक
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालासँग नागरिकका विश्वमणि पोखरेल र किरण भण्डारीले बुधबार लिएको अन्तर्वार्ताको मूल अंश :
तपाईका चुनावी एजेन्डा के हुन्?
कोइराला : मैले सुरूबाटै पार्टी प्रजातान्त्रिक तवरबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु। पार्टी एउटा पद्धति, मान्यता र आदर्शबाट चल्नुपर्छ। कांग्रेस लामो समयदेखि संघर्षबाट गुजि्रदै आएको छ। संघर्षका बेला पार्टी व्यवस्थित तवरमा सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मैले गणेशमानजी, किसुनजी र गिरिजाबाबुलाई पार्टी सञ्चालन पद्धति बसाल्न आग्रह गरेको थिएँ। तपाईंहरूले पद्धति बसाल्नु भएन भने पार्टी चलाउन ग्राहो हुन्छ भन्ने मेरो जिकीर थियो। मेरो आग्रह उहाँहरूले स्विकार गर्नुभयो। दुर्भाग्यवशः उहाँहरूकैबीच असमझदारी भए। आपसमा अविश्वास भयो।
मतमतान्तरले गर्दा गिरिजा गुट, भट्टराई गुट, गणेशमान गुट भनेर पार्टीमा गुटहरू बने। त्यो प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएपछि पार्टी नै फुट्यो, कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बन्न पुग्यो। मेलै जे चाहेको थिएँ, त्यो अनुसार हुन सकेन। पार्टीका साथीहरू मलाई आएर न्याय भएन, काम गर्नेहरूले अवसर पाएनन् भन्ने गुनासा गर्छन्। मलाई आएर न्याय भएन, मूल्याङ्कन भएन, अनुशासन भएन, विवेक भएन, संस्थागत निर्णय भएन भन्ने साथीहरू धेरै छन्। मेरो एउटा स्पष्ट मिसन छ। सुशिलदाइ कोठामा बसेर सधैं यस्तै कुरा गर्छन् भनेर पनि भन्छन्। कतिपय साथीमा मेराबारे गलत बुझाई पनि छ। मेरो एउटा मिसन छ। म त्यसमै केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु। पहिलो पुस्ताको अन्तिम नेताका रूपमा गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुन्जेल उहाँको उच्च व्यक्तित्वका कारण कतिपय कमी कमजोरीमा पनि उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने थियो। कार्यकर्तामा पनि यो फलानोको, ऊ फलानोको भन्दै हिँड्ने गरेको देखिन्छ। हामी संस्थाका हौं, हामी नेपाली कांग्रेसका हौं, काग्रेस हौं भन्ने भावना कमजोर भएको छ। यो समस्या दोस्रो पिँढीमा पनि छ। मैले युवाहरूलाई आह्वान गर्ने गरेको छु। अब युवाको काँधमा जिम्मेवारी आउँदै छ भनेर। त्यसैले युवाहरूले जिम्मेवारीका साथ कांग्रेसलाई लिएर जानुपर्छ। अहिले धेरै युवा साथी आएका छन्। नेविसंघ, तरुणदलमा २०, २५ वर्ष काम गरेका युवा पार्टीमा आएका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी युवाले राम्ररी लिन्छन भन्ने मेरो विश्वास छ। पार्टीमा हिजोका कमी कमजोरी, विकृति, विसंगिती र सरकारमा हुँदाका बखतमा भएका भष्टाचार, माफियातन्त्रका कुरा आए। मैले जहिले पनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छु। म पार्टीमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी बसाल्न मिसनका साथ लागेको छु। त्यसलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न चाहन्छु। कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटामात्र योजना हो। यही मेरो सबै भन्दा ठूलो मिसन, प्रोगाम हो।
अहिले पनि कांग्रेस गुटबाट मुक्त भएको देखिँदैन नि?
कोइराला : यो दुर्भाग्यको कुरा हो। पार्टी एक भयो तर भावनात्मक एकता हुन सकेन। महाधिवेशनको सन्दर्भमा फेरि यस्तो समस्या देखियो। यो गुट, त्यो गुट भन्ने कुरा निस्किएको छ। महाधिवेशनपछि गुटका कुरा समाप्त भएर काग्रेस नयाँ ढंगले प्रस्ुतत हुन्छ। महाधिवेशनपछि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सञ्चालन हुने मेरो विश्वास छ।
गुटबन्दीकैबीच, एउटै गुटका नेताबीच पनि आपसमा प्रतिस्पर्धा भैरहेको देखिन्छ। तपाईसँग नजिक भनिनेहरू आपसमै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा पनि त्यही देखिएको छ। किन यस्तो?
कोइराला : यो पार्टीको चुनाव हो। पार्टीको चुनावमा उम्मेदवारी दिने हक सबैमा छ। यो फलानो गुटको, ऊ फलानो गुटको भनेर मैले हेरेको छैन। काग्रेसकै चुनाव हो। त्यसले केही फरक पार्दैन।
विगतमा प्यानल बन्ने गर्थ्यो। यसपाली पनि त्यस्तै संकेत देखिँदै छ नि?
कोइराला : म प्यानल बनाउँदिन। साथीहरूले उम्मेदवारी दिन्छन्, त्यस अनुसार प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्छन्।
प्यानल नबनाउने अडानमा अडिन सक्नुहुन्छ त?
कोइराला : नअडिने के कुरा छ र? मैले कहिल्यै प्यानल बनाइन। महामन्त्री भएँ, उपसभापति भएँ, कहिल्यै प्यानल बनाइन।
गिरिजाबाबु हुँदा प्यानल बनाउने डिजाइनर तपाईं नै हो भन्नेहरू छन् नि?
कोइराला : होइन, होइन, त्यस्तो होइन। म गन्दा (फोहरी) पोलटिक्समा म छैन। पैसाको खेल गरेर जित्ने काम मबाट हुँदैन। जसरी मानिसहरूले भन्छन्, म त्यस्तो होइन। सामदाम दण्डभेद गरेर जित्ने भन्ने होइन। म त्यसका लागि योग्य पनि छैन। म त्यस्तो गर्दिन।
यसको अर्थ तपाई महाधिवेशनलाई स्वच्छ र एकताको महाधिवेशनको पक्षमा हुन्छ?
कोइराला : हो , निश्चयनै मेरो मान्यता स्वच्छ र एकताको महाधिवेशन हो।
तर ठूलो संख्यामा सदस्यहरू थपिएको, नयाँ नयाँ कार्यकर्ता आएको सन्दर्भमा सरकार निर्माणमा देखिएका विकृति कांग्रेस अधिवेशनमा पनि देखिन थालेको छ। यो निर्वाचन स्वस्थ र स्वच्छ हुँदैन भनिदैछ नि?
कोइराला : कांग्रेसमा १०, १२ वर्ष साधारण सदस्य र क्रियासिल सदस्यको अभियान चलेन। यसपाली हामीले क्रियासिल सदस्य खुला गरेका छौं। धेरै नयाँ मानिसको प्रवेश भएको छ। त्यसले गर्दा के होला, कसो होला भन्ने अडकल छ। उनीहरू पार्टीको मर्म अनुसार जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने प्रश्न छ। तर जिल्ला नेतृत्वले यी सबै कुरा हेर्नेछन्। एउटा बाटो लिन्छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारी कार्यवाहक सभापतिका रूपमा तपाईंको होइन र? निर्वाचन स्वच्छ बनाउने कुनै योजना छ तपाईसँग?
कोइराला : प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाउने काम हुनुहुँदैन। चरित्र हत्या गर्ने काम हुनुहुँदैन। म कसैप्रति लाञ्छना लगाउने पक्षमा छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकले केही केही आचारसंहिता बनाउँछ।
राष्ट्रिय राजनीति कांग्रेसको महाधिवेशनबाट प्रभावित हुने त होइन? महाधिवेशन नसकिई सरकार टुंगो नलाग्ने हो कि?
कोइराला : सरकार र कांग्रेसको महाधिवेशन अलग कुरा हुन्। हामी चाँडो भन्दा चाँडो सरकारको विषय टुङ्गो लागोस् भन्ने पक्षमा छौं। मुख्यत माओवादीले सोच्नुपर्‍यो। चार वर्ष भैसक्यो माओवादी सहमति, सम्झौता बाहिर गएको। शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा सरकार बन्न नसकेको हो।
एमालेको निर्णय हेर्दा भदौ २ को निर्वाचनबाट पनि परिणाम आउने देखिँदैन नि?
कोइरालाः एमालेले बुझ्नुपर्‍यो। उसको सरकार पनि बनिरहेको छैन। उसले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छैन। हामीले त एमालेलाई सहयोग गरेका थियौं। हाम्रो समर्थनमा एमाले सरकार बनेको हो। संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमै सरकार थियो। यत्तिकै पनि काग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने शान्ति प्रक्रिया सहमतिबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कांग्रेस गिरिजाबाबुको विरासतअनुसार शान्ति प्रत्रियाको अगुवाई गर्न चाहन्छ।
गिरिजाबाबुको रणनीति त माओवादीलाई विश्वासमा लिने र एमालेलाई अलिक पन्छाउने खालको थियो। तपाईहरूले एमालेलाई नजिकिएर माओवादीलाई पन्छाउँदै गरेको होइन र?
कोइरालाः होइन। माओवादीलाई कहाँ पन्छाएका छौं र? हामी मात्र होइन, नागरिक समाज छ। मूल प्रश्न त माओवादीले शान्ति सम्झौता किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने हो। संविधानसभा निर्वाचनअगावै टुंग्याउने भन्ने कुरा हुन्। तर निर्वाचनपछि माओवादीकै सरकार बन्यो, त्यो बेला पनि काम भएनन्। शान्ति प्रक्रिया भन्नासाथ माओवादी लडाकू समायोजन, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना, वाईसिएलको अधैसैनिक संरचना भङ्ग र कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ती हुन्। यी मुद्धामा हामी र एमालेबीच समानता छन्।
एमाले त कांग्रेसलाई विश्वास गरिरहेको छैन नि?
कोइराला : हामी विश्वासकै आधारमा अघि बढेका छौं। विश्वासकै आधारमा गिरिजाबाबुले माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको हो। गिरिजाबाबुले धेरै सहुलिएत दिनुभएको थियो। मैले प्रचण्डलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, किन शान्नि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भनेर। गिरिजाबाबुले माओवादीलाई आफ्नै सुरक्षा दिनुभयो। विश्वासकै आधारमा संसदमा एमालेको हाराहारी राख्नुभयो। संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा जुन बेला हाम्रो राम्रो अवस्था थियो, त्यो बेला उहाँहरूले मान्नु भएन। जब हाम्रो अवस्था खस्किएको थियो, त्यो बेला चुनाव गराउनुपर्छ भन्नुभयो, गिरिजाबाबु तयार हुनुभयो। माओवादीको विश्वास लिन त्यसो गर्नुभएको थियो। माओवादी जनताबाट अनुमोदित होउन् र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउन् भन्ने गिरिजाबाबुको मान्यता थियो। गर्नसम्म गरेको छ कांग्रेसले माओवादीका लागि। कांग्रेस माओवादी बिग्रियोस् भन्ने चाहँदैन।
अहिलेको गतिरोध २ गतेसम्ममा फुक्छ त?
कोइराला : म भन्न सक्तिन। एमाले र माओवादी दुबै उम्मेदवारी छोडनुपर्छ भन्नेमा मिलेका छन्। पहिले समाधानको बाटो आउनुपर्‍यो। त्यत्तिकै छोड्ने? विश्वासको वातावरण बन्नुपर्‍यो। माओवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको ५ दिनमा सबै कुरा मिल्छ भन्नुहुन्थ्यो। यसै गरी चार वर्ष लम्ब्याइयो। अब त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। गिरिजाबाबुले विश्वासका आधारमा माओवादीलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो। प्रजातन्त्रमा विश्वास सबैभन्दा ठूलो आधार हो। हामीहरू बन्दूक लिएर लड्न जाने होइन।
नेताहरूले संविधान पनि नदिने भए, शान्ति पनि दिएनन्, सरकार पनि दिन सकेनन् भन्ने जनतामा निराशा पाइन्छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
कोइराला : जनताले बुझ्नुपर्छ। कांग्रेसलाई अर्घेलो देख्नु भएन। कांग्रेसले माओवादीलाई हत्या, हिंसा र आंतकबाट यहाँसम्म ल्याएको। माओवादीले किन सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर भन्नुपर्‍यो। हामी अहिलेको अवस्थामा माओवादीलाई सरकार दिँदैनौं। सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेर नागरिक पार्टी बनेको अवस्थामा माओवादीलाई नमान्ने कुरा हुँदैन। माओवादीलाई हामी शून्यतामा छोड्न सक्दैनौं।
अब एमालेसँग सहकार्यका पक्षमा कति आशावादी हुनुहुन्छ?
कोइराला : गर्ने भए गर्छन्। नभए एमाले माओवादीसँग मिलेर जान्छ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। एउटा निर्णय त गर्नुपर्‍यो। हामीलाई केही समस्या छैन। उहाँहरू पनि शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नभै माओवादीलाई नेतृत्व दिनुहुदैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले शान्तिप्रक्रियाका कुरा इमान्दारीका साथ उठाउनुपर्‍यो। होइन त्यो छोडेर माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने हामीलाई आपत्ती छैन। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। आफ्नो अडान छोडेर जानुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो भने हामी रोक्दैनौं।
एमालेको एउटा धार र माओवादी दुबै नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा सहमति हुन्छ भन्छन् नि? कांग्रेसको के धारणा छ?
कोइरालाः केमा सहमति? सहमतिको स्वरुप खै? विकल्प नदिने? माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सबै काम गर्ने भन्छन्। हामी भन्छौ, कसरी विश्वास गर्ने? हामी स्पष्ट छौं, जबसम्म माओवादी नागरिक पार्टी बन्दैन, तबसम्म उसको नेतृत्व स्विर्कादैनौ।
त्यसो भए, माओवादीले लेखेर दिनुपर्‍यो?
कोइरालाः लेखेर होइन। कार्यान्वयन गरेर। लेखेर दिने काम धेरै पटक भए।
तर यो त ब्यवहारमा देखिएन नि। गुठबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको त सबै कार्यकर्तालाई थाहा छ। अब यदि पार्टी बलियो बनाउनु छ भने हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौं भनेर अगाडी बढ्न जरुरी छ। कुनै नेताको प्यानल भन‍ेर हिँड्दा नै पार्टी कमजोर भएको हो। यस कुरालाई पार्टीका नेताहरुले बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा समर्थक भएको नाताले यो कुरा आग्रह गरेको हुँ।
यस कथा राम्रो र रोचक छ तर तपाईंले यस्तो प्रजातान्त्रीक प्रणाली आफ्नै पार्टीभित्र लागु गर्नुपर्ने भएको छ। जब तपाईंले यसलाई आफ्नै पार्टीभित्र लागु गर्नुहुन्छ तब सबै युवाले तपाईंलाई समर्थन गर्नेछन्।
नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी गुट बनाउने उनी नै हुन्। अब उनकै कुरा कसरी पत्याउने?